Geoffrey Lipman dia mangataka ny fahamendrehana amin'ny fifidianana Sekretera jeneraly UNWTO
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Geoffrey Lipman dia mangataka ny fahamendrehana amin'ny fifidianana Sekretera jeneraly UNWTO
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Desambra 9, 2020
Antso iray hafa hisian'ny fahamendrehana amin'ny fizotry ny fifidianana UNWTO ho an'ny sekretera jeneraly. Mipoaka ny tantara ratsy sy ny henatra ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany, saingy ny valin'ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvil dia fahanginana.
Androany, Profesora Geoffrey Lipman, sekretera jeneraly mpanampy teo aloha, ary ny filohan'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) no nanampy ny feony tamin'ny taratasy misokatra natolotry ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana fizahan-tany eran'izao tontolo izao omaly.
Ity dia dika mitovy amin'ny taratasy misokatra nosoratan'ny Profesora Lipman niparitaka tamin'ny 9 Desambra 2020:
Ho an'i Francesco Frangialli, Taleb Rifai
Manampy ny feoko amin'ny fiantsoana Decency amin'ny fifidianana ny Sekretera Jeneraly
Ry namako malala,
Manoratra aho mba hanampy ny feoko amin'ny maha "olom-panjakana loholona" an'i Francesco sy Taleb, mpiara-miasa tamiko teo aloha teo amin'ny fitantanana ny Organisation, mba hiantso tsy ho maika sy ho mendrika kokoa amin'ny fifidianana ny sekretera jeneraly manaraka.
Ary tsy miresaka fotsiny amin'ny mpiara-miasa taloha izay niasa mafy taminareo roa hanangana UNWTO, fa amin'ny maha-mpilalao indostrialy efa ela ahy, (toy ny Tale Mpanatanteraka ny IATA ary ny filoham-pirenena voalohan'ny WTTC) ary mafana fo mafana fo amin'ny toetrandro.
Tsy miatrika krizy iray isika - fa roa.
Ny krizy ara-toetrandro dia toy ny COVID amin'ny steroid ary na dia eo aza ny fiatrehana ny fanamby ataon'ny COVID amin'ny maha-olona, ​​asa aman-draharaha sy asa, dia tsy maintsy mamaly ireo tafio-drivotra mahery vaika koa isika, tondra-drano, haintany, ala sy ala mandrehitra, ary koa ny fifindra-monina - izay rehetra dia manondro ny fitomboan'ny krizy amin'ny toetrandro ary mahatsiravina ho an'ny sehatra iray izay natsangana ny vokatra arakaraka ny toetr'andro azo zakaina sy azo zakaina. Tokony hampitombo ny valin'ny toetrandro isika ary hiondrika amin'ny alàlan'ny famoahana karbaona toy ny sehatra hafa rehetra amin'ny toekarena. Ary tsy maintsy manomboka izao isika. Na mangatsiaka na manendasa ny zafikelinay. Izany no dikan'ny eXistential.
Mila UNWTO izahay mandritra ny taona vitsivitsy izay miara-miasa amin'ireo mpandray anjara rehetra hiatrehana ireo olana ireo - ary iray izay hita fa mifantoka amin'izy ireo fa tsy amin'ny fifanolanana anatiny. Manana COP 26 tena manan-danja ihany koa isika ao Glasgow efa nahemotra hatramin'ny faran'ity taona ity. Mila toerana tsara sy mazava amin'ny fanohanana an'i Paris 1.5 isika. ary mbola tsy manana isika - UN SG Guterres dia niantso ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany aorian'ny areti-mando mba ho "Sariaka amin'ny toetr'andro" ary tokony hitarika an'ity olana ity amin'ny maha sehatra iray antsika.
Tsy haiko manokana raha toa ka napetraka tsara ireo olana naterak'i Taleb sy Francesco, saingy fantatro tsara izy roa lahy - ary raha namorona ny marimaritra iraisana izy ireo mba hamoahana ampahibemaso amin'ity olana ity; Mijoro miaraka amin'izy ireo aho.
Tsy misy fatiantoka ho an'ny fikambanana amin'ny fanaovana ny zavatra toa marina sy ny lojika - hiasa amin'ny fe-potoana mety hamaly ny krizy ankehitriny sy amin'ny fomba toa mendrika ihany. (tsy nahita loatra ny fahalalam-pomba isika tato anatin'ny 4 taona lasa ary nomena fotoana faharoa izahay amin'ny maha-vondrom-piarahamonina an'izao tontolo izao miaraka amin'ny Fiadidiana Biden sy ny fidirany indray ao Paris & Green Deal. Ny fianakavian'ny Firenena Mikambana dia nitana andraikitra lehibe mamaly ny krizy roa - ary isika mpivahiny sy fizahan-tany dia tokony handray anjara feno)
Noho ireo antony rehetra voalaza etsy ambony ireo dia manatevin-daharana ireo namako sy mpiara-miasa amiko Francesco sy Taleb aho amin'ny fangatahana an'i Zurab hanao ny tsara.
Misy ny fitenenana taloha fa ny fahamarinana dia tsy tokony hatao fotsiny - fa tsy maintsy ho hita fa vita. Amin'izao fotoana izao dia tsy izany.
Profesora Geoffrey Lipman
Mpiara-miasa SUNx (Network Universal mahery - lova ho an'i Maurice Strong, izay nanomboka azy rehetra)
Ny tanànan'ny New York izao dia mitaky porofo vaksinin'ny COVID ho an'ny ...
Tanànan'ny Etazonia 2021 tsara indrindra hankalazana ny fahefatry ny Jolay
Valiny ho an'ny fonosana fanampiana ny fizahan-tany any India haingana sy ...
Tongasoa mpitsidika voalohany an-tapitrisany i Jamaika hatramin'ny nanombohan'ny ...
Skål dia manome valisoa ho an'i Walter Kenneth "Ken" ...
Ahoana ny fomba mety hahatonga ny sidina fiaramanidina ho an'ny UK eran-tany ...
Serivisy seranan-tsambo voalohany eo anelanelan'ny Harbor Harbor sy ...